Rooble oo dabool adag sii saaray kiiska Ikraan Tahliil | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo dabool adag sii saaray kiiska Ikraan Tahliil
Sida ay muujinayaan xogo ay heshay Keydmedia Online, 18 maalmood kaliya ayay ku qaadatay guddiga baarirsta, (Nov 3-21), in ay soo saaraan naatiijada baaris hordhac ah, isla-markaana ay gaaraan go’aanka ay ku bari-yeeleen eedeysanayasha NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ku dhawaad 24 saac ayaa laga joogaa xilliigii uu Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, General Cabdullaahi Buulle-kamey, soo bandhigay baaris hordhac ah, oo ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax, hayeeshee, ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxday xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo hore u ballan-qaaday in kiisku heli doono caddaalad.
Cabdullaahi Buulle-kamey, oo shalay ka soo muuqday arag-baahiyaha ku hadla afka Dowladda, ayaa sheegay in guddiga loo xil-saaray baariska kiiska, uusan helin wax caddeyn ah oo muujinaya in Ikraan ku maqan tahay gacanta Saraakiisha NISA, ee dacwadu ka taallo Maxakamadda CQS.
Ujeedka hadalka Buule-kamey, ayaa lagu macneeyay bari-yeelidda eedeysanayaasha, iyadoo lagu soo aaddiyay xilli la filayo in maalmaha soo socda Yaasiin Farey, ka mid noqdo shan ruux oo kuraas Baarlamaan loogu boobi doono Dhuusamareeb, halka Fahad iyo Kullane, qudhoodu u diyaar garoobeen ka mid noqoshada xubnaha Golaha shacabka.
Farey, wuxuu maanta qaatay shahaadada musharraxnimo, wuxuuna Duusamareeb ka dejiyay ciidamo ka tirsan NISA, gaar ahaan kuwa loo yaqaan, Duufaan, oo u badan dhallinyaro uu Kullane Jiis ka soo aruuriyay Gedo, si ay u noqdaan ergada kursiga Hop067.
Ra’iisul Wasaare Rooble, wuxuu hore u diiday war-bixin ku saabsan kiiska Ikraan oo Taliskii Fahad Yaasiin uu soo saaray [2 September 2021] taas oo lagu sheegay in sarkaaladda maqan ku baxday gacanta Al-Shabaab.
Hayeeshee, wuxuu 60 maalmood kadib, aqbalay, warka Buulle-kamey, ee u jeedkiisu yahay in lagu duugo kiiska oo dhan, si uusan caqabad ugu noqon eedeysanyaasha oo intooda badan doonaya in ay helaan kuraas Baarlamaan, si ay gabbaad uga dhigtaan Golaha Shacabka.
26 October 2021, Ra’iisul Wasaaraha, ayaa dhamaan hoggaanka saraakiisha iyo shaqaalaha hay’adda NISA, ku amray in ay la shaqeeyaan xeer-ilaaliyaha Makamadda CQS isla-markaasna loo fududeeyo baaritaannada uu ku howlan yahay ee kiiska la xariira.
Todobaad kadib amarka Ra’iisul Wasaaraha, ayay NISA, (Nov 3) waraaq u qortay kooxda baarista, ee uu hoggaaminayo Buulle-kamey, iyagoo ku war-galiyay inay diyaar u yihiin la shaqeeynta guddiga baaraya Kiiska.
Saddexdii bishaan November ilaa 21-kii, oo shalay ku beegneyd, ayay kooxda barista ku qaadatay, in ay ku shaaciyaan barista hordhaca ah, oo ay ku sheegeen in aysan saraakiisha NISA, ku lug lahayn kiiska Ikraan.
Wajiga labaad ee barista, waxay natiijadiisu noqon doontaa xaqiijinta in Ikraan [July 14] Kooxda Al-Shabaab, ku dileen Jubbada hoose, halkaas ayuuna Rooble, ku soo af-meeri doonaa sheegashooyinkii beenta ahaa ee uu danaha gaarka ah ka lahaa.
Tan iyo markii uu ka soo laabtay Qatar, Rooble, wuxuu u muuqday inuu dib ugu laabtay dhamaadkii sanadkii hore, markaas uu ku hoos jiray Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, wuxuuna billowgii bishaan heshiis daneysi siyaasadeed ah la galay kooxda waqtigu ka dhacay 7-dii Feebaraayo.